W.Gudaha | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL W.Gudaha – Page 71 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Sep 23rd, 2018 · 6 Comments
GAROOWE(P-TIMES) – Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland Dr Cali Cabdullaahi Warsame oo maanta ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaas, ayaa wareysi uu Siinayay Radio Sahan Garoowe, wuxuu kaga hadlay waxyaabaha rasmiga ah ee waqtigan ku soo beegay is casiladiisa.HALKAN RIIX SI AAD U DHAGEYSATO WAREYSIGA Wasiirkii Deegaanka ayaa ku eedeeyey Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali...
Sep 23rd, 2018 · 2 Comments
GAROOWE(P-TIMES)- Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland Dr Cali Cabdullaahi Warsame ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Is casiladiisa, waxayna Puntlandtimes heshay nuqulo cadeynaya warqadda Is casilaaddan oo loo diray Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wasiirka Deegaanka ayaa si rasmi ah u cadeeyey in ay fashilmeen sadex mashruuc oo dhamantood muhiimad u lahaa Shacabka...
DEG DEG: Dagaal culus oo ka socda agagaarka Ceerigaabo iyo Hub culus oo la maqlayo.
CEERIGAABO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Ceerigaabo ayaa sheegaya in ay shacabka deegaanka Hal-Dhaadsan ay maqlayaan hub culus oo ay isku ridayaan dhinacyada ciidamada Somaliland iyo kooxda Col. Caare ee kasoo horjeeda. Wararka ayaa sheegaya in uu dib u bilowday dagaalkan oo shalay galab dhacay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. Boqolaal ka mid ah ciidamada Somaliland gaar ahaan...
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa 22 April 2018 ee sannadkan baahiyey in wasiiro katirsan Xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan labadii sanno ee u dambeysay la dhacsaneyn siyaasadiisa ay bilaabi doonaan is casiladooda bisha October, ayna kaga harayaan tareenka Xukuumadaas. Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu si rasmi ah u xaqiijiyey in ay dhab tahay iscasilaada wasiirka Deegaanka...
Haweenay goor dhoweyd dil argagax leh iskugu gaysatay Muqdisho & Shacabka oo….
MUQDISHO(P-TIMES)- Haweenaydan u geeriyootay Sunta ay Cabtay ayaa waxa ay daganayd xaafada Jungal oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolkan Banaadir. Haweenayda Sunta cabtay ayaa waxaa magaceeda lagu soo koobay Shukri, waxaana sababta ay sunta isugu dishay lagu sheegay in loo diiday wiil ay is jeclaayeen. Warar ayaa waxa uu sheegayaa in Haweenay Sunta Cabtay wiilka ay jeclayd ay is guursadeen, hal...
Sep 22nd, 2018 · 6 Comments
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) kuwooda sida gaar ka u tababaran ee Kumaandooska ayaa xalay iyo maanta 22-23 September,2018 waxay hawlgal qorshaysan oo ka dhan cadowga Al Shabaab ka fuliyeen degaanada Madarshoon,Karin Xagarood,Mariidle, Diindigle iyo Harweyn ee Buuraha Cal Madow, oo qiyaastii 53km kaga beegan dhanka Koonfur galbeed magaalada Bosaso ,Puntland,Soomaaliya. Ciidanka PSF waxay hawlgalkan...
Wasiirka Waxbarashada DFS oo amaro dul dhigay dadka maamula dugsiyadii hore ee Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa wareegto uu soo saaray ku amray in muddo 30 cisho gudaheed looga baahan yahay cid kasta oo gacanta ku heysa dugsi ay dib ugu soo celiso magacii uu lahaan jiray ka hor 1-1-1990-kii. Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa tilmaamay in magacyadda ku sharfan dugsiyadda dowladda...
Maraykanka oo weerar ku qaaday duleedka Kismaayo & 18 Xubnood oo lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay
Sep 22nd, 2018 · 1 Comment
MUQDISHO(P-TIMES)- Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay duqeyn ku dishay 18 xubnood kamid ah Al-Shabaab kadib markii ciidamo Soomaali ah iyo kuwo Maraykan ah lagu weeraray Koonfurta Soomaaliya sida maanta oo sabti ah uu sheegay taliska Maraykanka ee Afrika. Ma jiraan cid ka tirsan ciidamada Soomaalida iyo kuwa Maraykanka oo lagu dilay ama lagu dhaawacay weerarka sida uu sheegay Nate Herring oo ah...
Ciidamadii ugu badnaa oo lagu soo daadiyey gudaha Gaalkacyo, Bandow deg deg ah.
GAALKACYO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa lagu soo daadiyey waxaana ilaa hadda la xiray inta badan jidadkii magaaladda. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa oo katirsan kuwa gaarka ah ee difaaca Puntland iyo kuwa isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo ay hadda xireen gabi ahaanba meheradihii Ganacsiga. Saraakiisha ciidamadu wey ka...
DHAGEYSO: Khasaaraha ka dhashay Dagaal culus oo galabtay dhexmaray Ciidamo S/LAND iyo Jabhadda Col, Caare
CEERIGAABO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo galabtay ciidamada Somaliland, gaar ahaana kuwa loo yaqaano RRU-da ee la dagaalanka Argagixisadu ay ku qaadeen deegaanka HAL DHAADSAN iyo Buqda, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo uu hogaaminayo Abaanduulihii hore ee ciidamada gobalka Sanaag Col, Jamaal Baaxad.RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO WARARKI U DAMBEEYEY Dagaalkan ayaa...
Dagaalkii ugu horeeyey oo galabtay ka dhex qarxay Jabhadda Caare & Ciidamada S/LAND, kana dhacay G Sanaag
CEERIGAABO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Ceerigaabo ee gobalka Sool ayaa cadeynaya in uu galabtay iska horimaadkii ugu horeeyey dhexmaray ciidamada Somaliland iyo ciidamo katirsan Jabhadda Col, Caare, uuna ka dhacay halka loo yaqaano HAL-DHAADAN. Wararka ayaa sheegaya in uu dagaalkan ku bilowday ka dib markii ciidamo uu hogaaminayay Col, Baaxad oo horey u soo noqday Abaanduulaha ciidamada...
FAAHFAAHIN: Qaraxyo culus oo hada ka dhacay magaalada Muqdisho & Gaadiid gubanaya
MUQDISHO(P-TIMES)- Jugta qaraxyo xoogan ayaa waxaa hada laga maqlay degmooyinka gobolkan Banaadir, waxana sidoo kale cirka isku shareertay uuro aad u fara badan. Qaraxyadan ayaa dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in ahaayeen laba gaadhi oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ay ku qarxeen agagaarka Isgoyska Dabka ee magalada Muqdisho, waxaana qaraxyadaasi kadib la maqlayey dhawaqa rasaas...
Jeel Ogaadeen oo si rasmi ah albaabada la isugu dhuftay & 285 Maxbuus oo weli ku xiran
JIGJIGA(P-TIMES)- Waxaa si kama dambays ah loo xaqiijiyey in la xirayo jeelkii dhexe ee dawlad degaanka Soomaalida ee loo yaqaannay Jeel Ogaadeen. Xabsigaas oo tacaddiyo badan loogu gaysan jiray dadka maxaabiista ah sida ay sheegeen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dawladdii hore ee deegaanka Soomaalida waxay sheegi jirtay in dadka xabsigaas lagu hayo loo samaynayo dhaqan celin. Waxaa si...
DEG DEG+DAAWO: Qaraxyo galabtay ka dhacay Muqdisho iyo Baabuur gubanaysa.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la maqlay dhawaaqa sadex qarax oo ka dhacay gudaha caasumadda Soomaaliya, laguna weeraray shaqsiyaad kala duwan waxaana wararku cadeynayaan in ay jiraan khasaare ka dhashay. Mid kamid ah qaraxyadan ayaa ka dhacay Isgoyska Dabka ee Muqdisho, waxaana waxyeelo kasoo gaartay mid kamid ah wadihii baabuurka lala beegsaday oo...
Wararkii ugu dambeeyey ee Puntland, Madaxweyne Gaas oo gaadhay Bosaso & Kulamo ka socda madaxtooyada Bosaso
BOSASO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu gaadhay goor dhoweyd madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safaro dhanka dhulka ah ku marayey qaybo kamid ah gobolka Sanaag. Madaxweyne Gaas ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu xarunta madaxtooyada kulamo kula leeyahay maamulka gobolka Bari,...
DHAGAYSO:Taliska Booliska Somalia oo shaaciyey in dad badan loo soo qabtay dilalkii ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)-Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed sareeyo Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay xaalada amni ee magaalada Muqdisho iyo dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODKA Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho ayuu ku sheegay in wax kasta ama dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho loo...
DHAGAYSO:Askari dilay wiil Mooto bajaajle ah oo maanta xukun lagu riday Baladweyne
BALADWEYNE(P-TIMES)- Maxkamada Ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogasha ah ku xukuntay Mahad Xuseen Shiidoow oo ka tirsanaa ciidamada booliska degmada Baladweyne ee Gobalka Hiiraan. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO Askari ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu si bareer ah u dilay Yaasiin Cali Saneey oo ka mid ahaa wadayaasha gawaarida moota bajaajka Baladweyne. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODKA Guddoomiyaha...
Dil kale oo naxdin leh oo si fool xun kuga dhacay magaalada Muqdisho & Dadka oo wada yaaban
MUQDISHO(P-TIMES)- Waxaa kooxo hubaysan ay dil ka gaysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan gudaha suuqa Bakaaraha, iyadoona dilkaasi uu qayb ay ka yahay dilal maalmihii ugu dambeeyey is daba joog ahaa oo ka dhacayey magaalada Muqdisho. Ninka lagu dilay suuqa Bakaaraha ayaa waxaa la sheegay inuu la socday xilliga la beegsanayey gaadhi, kaas oo dhexdiisa rasaas lagu furay taas oo uu u dhintay. Goob joogayaal...
DHAGAYSO:Qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ah ee Puntland oo baaq u diray odayaasha dhaqanka & Xildhibaanada cusub oo laga hadlay
GAROOWE(P-TIMES)- Qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ee Puntland ee fadhigoodu yahay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo isimadda Puntland in ay soo xulaan xildhibaano tayo leh oo badala xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ee haatan jooga. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODADKA Gudoomiyaasha ururada PUNSAA iyo MAP oo shir jaraa’id ku qabtay gudaha magaalada...